Akụkọ - Isi ike nke ihe onwunwe na mineral
Gas chebere Waya Hardfacing
Isi ike nke ihe onwunwe na mineral
1. Ọla diamond
8. carbide molybdenum
9. carbide chromium
18. Igwe ndọta
20. Austenite, Akwa CR
23. Austenite, Alloy dị ala
25. Pearlite, Achọpụtaghị ya
32. Mkparịta ụka
Wodon bụ ọkachamara na imepụta efere mkpuchi ihe mkpuchi ihe mkpuchi Chromium carbide, anyị na -anabata teknụzụ ịgbado ọkụ arc nke nwere ọdịnaya Cr karịa sitere na 25% ruo 45%. Mpekere olu carbide na microstructure dị elu karịa 50% na ike kacha nke urughuru bụ HV1800. Usoro ASTM-G65 A dị n'okpuru 0.16g.
Efere bimetallic nke Chromium Carbide:
Ọkara/Lọla carbon steel + Aakwa na -eguzogide brasion → Cefere bimetallic hromium carbide nwere njikọta ọla
(Q235/Q345B + Chromium Carbide machie) Cefere bimetallic hromium carbide site na armer ma ọ bụ ịgbado ọkụ arc mepere emepe
Mkpuchi na -eguzogide ọgwụ nwere nnukwu ihe siri ike carbide chromium carbide. A na -ekesa irighiri ihe ndị a n'ofe oyi akwa niile, na -emepụta microstructure siri ike. Ihe isi ike bụ HRC 58~ 65 ma dabere na ọkpụrụkpụ nke machie.
Isi ihe mejupụtara efere Wodon bụ C (%): 3.0 ~6.0 na Cr (%): 25 ~ 45. Ọdịdị kemịkal a na -ebute irighiri ihe siri ike nke Cr7C3 chrome carbide. Micro-hardness (ruo HV1800) nke ihe ndị a niile na oyi akwa ga-ekwe nkwa elu na-eguzogide ọgwụ.
Mkpuchi na efere ala bụ njikọta ọla. Mkpuchi ahụ ga -abanye n'ime efere ala ihe dị ka 0.8 ~ 1.8 mm, na -eru ruo 350 Mpa na ule anyị.
WD1200 na -eyi efere enwere ike iji ya maka arịrịọ abrasion siri iketiihe.
* Chromium carbide machie efere na -eguzogide ọgwụ
* Site na teknụzụ ịgbado ọkụ arc
* Ngwakọta Chemical: C: 3.0-6.0% Kr: 25-45%
* Chromium carbide Cr7C3 olu pere mpe ihe dịka 50%
* Ọkpụrụkpụ nke oyi akwa na -eguzogide nwere ike iru 50 mm
* Nguzogide okpomọkụ ruo 600 Celsius
*Ọkwa dị larịị na -eyi mpaghara na -eguzogide ọgwụ 1400*3000mm, 1400*3500mm, 2100*3500mm
* Mma dị larịị nke dị larịị
* Isiike: HRC58-65 (650-720HV)
A na -eji efere ndị a n'ọtụtụ ebe na Ngwuputa, Cement, Ike, Kol, Port, Wind turbines na ụlọ ọrụ Metallurgical..
Oge ezipụ: Sep-27-2021